बाग्लुङ्गमा धारा उद्घाटन भाईरल बारे भनियो | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
August 20, 2018 Nepal E News
गुल्मी, भदौ–४ । बाग्लुङ्गमा धारा उद्घाटन भाईरल बारे भनियो छिमेकी जिल्ला बाग्लुङ्गमा समाजमा जे छ त्यही वास्तविकता नलुकाईएको एउटा दृश्य देखियो ।
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको त्यस दृश्य थियो भदौ २ गते बाग्लुङ्ग नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित साविकको मुलपानी गाविसमा कैगले ढिकीचौर खानेपानी योजनाको उद्घाटन समारोहको ।
झट्ट हेर्दा हाँसो पनि उठ्ने र गहिरिएर सोच्दा हाम्रो समाजको वास्तविकतालाई उजागार भएको त्यस दृश्यले चिन्तन गर्नृ बाध्य बनायो ।
त्यस दृश्य विशेष गरी न्युज–२४ टेलिभिजनको अनलाईलनमा एक रात मै १५ हजार जनाले शेयर गरेर अत्यन्तै भाईरल भएको छ ।
यसबारे उद्घाटन गर्ने जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिका ब्यक्तिहरुसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौं ।
जे थियो त्यही गरेका थियौंः अध्यक्ष होमनाथ गौतम
त्यस खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष होमनाथ गौतमले भने–‘यस नगरपालिका भित्रको यो गाउँ सबै भन्दा विकट हो ।
२०४८ साल देखि लुथ्रन वल्र्ड भने एक विदेशी संस्थाले यहाँको खानेपानी योजना सुरु गरेको थियो ।
बिचमा त्यतिकै विच्किएपछि यहाँका बासिन्दा निरास थिए । यसपालिको निर्वाचनपछि बाग्लुङ्ग नगरपालिकाले हाम्रो खानेपानी समस्यालाई गम्भीर रुपले लियो ।
त्यहाँका करिब ५ लाख भन्दा बढि रकम जम्मा गर्न प्रत्येक घरधुरीले ५ हजारका दरले उठाए ।
सबै गरेर करिब १३ लाखमा यहाँका १ सय ६ घरधुरी मध्ये बसाई सराई गरेर आएकाहरुले त्यो भन्दा बढि उठाए ।
लिफ्ट समेत गरेर माथीका १० घरधुरीसम्म घर घरमा पानी पुराइएको छ ।
उनले थपे, ‘जुन तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनाईएको छ त्यो तस्वीर कार्यक्रम स्थलमा टाँगिएको त्रिपालको बाँसमा तत्काल उद्घाटन प्रयोजनका लागि मात्र हो ।
यो भ्याईरल बनाउनुको कारण गजबको छ ।
यस वडाका कांग्रेस सभापति शशीधर उपाध्ययले माथी ट्याङकी मै उद्घाटन गरौं भन्नु भएको थियो ।
हामीले कार्यक्रम स्थलमै गरौं भनेर तल झ¥यौं । कार्यक्रम धेरै तामझाम र समय बढि नलम्बाउँ भन्ने सोचेर हामीले कुनै पनि राजनैतिक दलको तर्फबाट बोल्न नलगाई बरु उपभोक्ताहरुले हालसम्म भोगेको पिडा बोल्न लगायौं ।
उहाँहरु आँखाबाट आँशु झारेको दृश्यले अतिथीहरु भवुक हुनुभएको थियो ।’
‘सभापति उपाध्याय ज्युले आफु बोल्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहेको सुइको मैले पाईसकेको थिएँ ।
उहाँले छोरा देबेन्द्र गौतमलाई लगाएर उक्त तस्वीर भाईरल बनाउनु भएको हो । हामी त समाजको बास्तविकता जे छ त्यही पस्किने हो ।
घर घरमा पाईपमा पानी पुगेको छ तर धारा बनाउन नसकिएको सत्य हो ।
हामी देखालो तामझाम चाँहदैनौं । चाहेको भए एउटा गतिलो पक्की धारा बनाएर उद्घाटन गराउन सक्ने थियौं ।’
‘जनताको घर घरमा पक्की धारा दिन सकिएको छैन तर कांग्रेस सभापतिले माथी पक्की ट्याङकीमा उद्घाटन गराउन भनेको कुरा हामीले न चाहेकै हो, रियालीटी दिन खोजे कै हौं । हामीले कार्यक्रमको खाजा खर्च समेत कम गरेका थियौं ।’
खीर पकाउने भनेर दुध मगाएका थियौं । त्यो दुध फाटेपछि खीर पकाउन सकेनौ । पछि मेयर ज्यु र सांसद लगायतका अतिथीहरुले चिउरा खाएर जानु भएको हो । समाजको यर्थात लुकाएर तामझाम गर्ने विषयलाई सारा कांग्रेसजन र हामी सबैले सिक्नु पर्छ । ’
मलाई बोल्न दिएनः कांग्रेस सभापति
त्यस वडाका कांग्रेस सभापति उपाध्यायले त्यस कार्यक्रममा आफुलाई बोल्न नदिएको प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे ।
उनले पुर्र्व एमालेहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै भने–‘यो कुरा लेखि दिनुस् कि यहाँ एमालेहरुले हरेक कुरामा एकलौटी गरेका छन् ।
कसैको पनि घरमा धारा छैन, तर उनिहरुले घर घरमा धारा भनेर प्रचार गरेको हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।
हामीले २०४८ सालदेखि लुथ्रन सेवा समाजबाट खानेपानीको काम सुरु गरेका हौं ।
साविकको गाविस देखि रकम छुट्टाउँदै आएका हौं ।’
‘अहिले यस वडामा नगरपालिकाले ४ लाख ३५ हजार रकम छुट्टायो । त्यसबाट यति काम भएको तर उनिहरुले सम्पन्न नहुँदै सम्पन्न भयो भनेर गलत प्रचार गरेका छन् । जनताले पाँच पाच हजारका दरले रकम हालेका हुन् । यहाँ आएर हेर्नुस रातामाटा कालिमाटी मोटरबाटोमा ७० लाखको टेण्डर गरिएको हो ।’
‘काम राम्रो भएको छैन । अर्को मोटरबाटोमा ९ लाखको टेण्डर ठेकेदार कुमार खड्कालाई परेको हो । ढुङ्गा ओसार पोसार छ । कतै पनि काम राम्रो भएकै छैन । त्यसैले होला मेरा छोराले त्यो फोटो भाईरल बनाएका होलान् ।
प्रशंसा गर्ने कामलाई बदनाम गराईयोः मेयर
पूर्व नेकपा एमालेबाट बाग्लुङ्ग नगरपालिका मेयर बनेका जनकराज पौड्यालसँग सम्पर्क राख्दा उक्त तस्वीर भाईरल बनाउने र गलत प्रचार सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रति अनौठो लागेको बताए ।
‘त्यहाँका १ सय ६ घरधुरीमा पानी त पुग्यो तर धारा बनाउन त्यो रकमले नपुगेको रियालिटी दिन हामी खोजेका हौं ।
समाजको वास्तविकता लुकाउने राजनैतिक दलका मान्छे हामी परेनौ ।
एउटा सामन्य काममा ठुलो तामझाम देखाउने, उद्घाटनमा खुसी ढलाउने, समाजको वास्तविकता लुकाएर निकै ठुलो काम गरे जस्तो हामी देखाउँदैन । विकट गाउँ हो त्यो ।
त्यहाँ पानीको हाहाकार र मोटरबाटोको समस्यादेखि हरेक कुरामा हामी चिन्तित छौ ।’
गत आर्थिक वर्षमा छुट्टाईएको रकम र मापदण्ड अनुरुपको काम सम्पन्न भएकै हो र जे छ त्यही उद्घाटन गरिएको हो ।
आगमी वर्ष त्यहाँ के गर्नु पर्ने हो, सोचिने छ ।
कोही अत्तालिन पर्दैन विकास अब क्रमिक रुपले गरेरै छाड्छौं ।’
कांग्रस सभापतिलाई बोल्न दिएको भए हुन्थ्योः सांसद
उद्घाटन गर्न पुगेका पुर्व एमालेका नेता तथा गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ्ग क्षेत्र नम्वर १ प्रदेश ‘क’ का सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले कल्पना नै गर्न नसकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको प्रतिकृया दिए ।
‘कांग्रेस सभापतिले माथी पक्की ट्याङकीमा उद्घाटन गरौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
आयोजकहरुले रियालिटी दिन खोजेर कार्यक्रम स्थलमा टाँगिएको चार वटा बाँसका खम्मा मध्ये एउटामा बिछाईएको पाईपमा उद्घाटनको प्रयोजनको लागि मात्र धारा फिट गरेर उद्घाटन गरिएको हो ।
समाजको त्यो रियालिटी हामीलाई पनि ठिक लाग्यो ।’
देशको विकास क्रम नै त्यस्तै छ भने किन लुकाउने ? किन जनतालाई ढाँट्ने ? त्यस्तो काम त ढँटुवा राजनैतिक दलले मात्र गर्ने गर्छन् होला ।
हामी गर्दैनौं । हेलिकप्टरमा चढेर उद्घाटन गर्न गईयो भन्न लाज लाग्दैन ? मयेर साबको गाडीमा हामी कोचाकोच भएर गएका थियौं ।
गाडीबाट ओर्लेको देख्नेहरु उनै हुन् । उनैले गाडीबाट ओर्लेर स्वागत गर्ने उनैले हेलिकप्टरबाट आए भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने ? लाज लाग्दैन ? कति दिन चल्छ जनता माथी यस्तो झुटको खेती ? त्यहाँका जनताको समस्या र उनिहरुको योगदानको सर्वत्र प्रशंसा गरिनु पर्ने हो ।
हिसाव कितावको पारदर्शीता हेर्दा म दंग परें । त्यस्तो सबैतिर भई दिए यो देश कहाँ पुग्ने थियो होा भन्ने लाग्यो ? केहि रकम त नगरपालिकाले दियो, त्यो भन्दा बढि जनता आफैले पैसा उठाएका छन् ।
पैसा भन्दा बढि जनश्रमदान गरेर घर घरमा पानी पु¥याएका छन ।
पक्की धारा नभएपनि घर घरमा पानी त खसेकै हो नि ? त्यस्तो उदाहरणीय काम गरेका त्यहाँका जनतालाई मैले कार्यक्रम स्थलमा दिलैदेखि सम्मानका शब्द बोलें तर कतिपयले तुच्छ राजनीति गरेर उनिहरुलाई कार्टुन बनाउँदै बदनाम गराउने ?
अब पहिलाको जस्तो राजनीति गरेर हुँदैन । अबको राजनीतिले नयाँ मोड लिई सक्यो । साथीहरुले सिक्नु प¥यो ।
हामी अरुले जस्तो खोला नै नभएको ठाउँमा पुलको योजना हाल्यौं भनेर फेसबुकमा प्रचार गर्ने राजनैतिक दलका मान्छे परेनौ ।
जे प्रचार गरियो, त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कोही कोहीहरु निकै अत्तालिदै छन् । अत्तालिनु पदैन ।
सबै मिलेर जनताको सेवा गरौं । आफु सत्तामा छँदा के गरें ? भनेर समिक्षा गरियो भने बल्ल मात्र सकरात्मक सोचको बिकास होला हामी त्यही अपेक्षा र शुभेच्छा ब्यक्त गर्दछौं ।’ प्रेम सुनार
प्रदेशबाग्लुङ्गमा धारा उद्घाटन भाईरल बारे भनियो